Wax ka ogow sababaha keenay in mar kale Wasiir Bidhaan la soo magacaabo? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Raashiya oo Turkiga u dirtay diyaaradaha Dab demiska
Wax ka ogow sababaha keenay in mar kale Wasiir Bidhaan la soo magacaabo?
By Radio Dalsan Reporter	 On Oct 21, 2020
Wasiir Cabdillahi Bidhaan Warsame ayaa ka mid noqday Xukuumadda labaad ee mudada xil haynta Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo tii kowaad ee Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Walow aad loo sadaalinayey soo laabashada Cabdillahi Bidhaan, hadana waxa uu loolan adag kala kulmay siyaasiin miisaan culus oo ku beel ah, kuwaas oo rabay in ay golaha wasiirada ee cusub ka mid noqdaan.
Hase yeeshee, sida in badan oo ka mid ahaa Xukuumaddii hore ay u soo laabteen, sida Cabdiraxmaan Bayle, Axmed Ciise Cawad, Khadiija Maxamed Diiriye iyo Jamaal Maxamed Xassan ayuu Bidhaan u soo noqday.
Bidhaan oo dadka yaqaan ay ku tilmaan siyaasi dagaal yahan ah, dagan, dad isku wad leh ayaa dhinaca kale waxqabad muuqda ku soo bandhigay Wasaaradda Kalluumeysiga labadii sano iyo dhawrkii bilood ee uu joogay.
Waxyaabaha uu Wasaaradda ku soo kodhiyey waxaa ka mid ah;
1-In Wasaaradda uu qaab dhismeed tii uu ugu yimi ka duwan ka sameeyey oo uu waxaaha wasaaradda u dhiibay dhallinyaro aqoon, khibrad iyo fir fircooni isku biirsaday.
2 – Wasaaradda oo door weyn ka ciyaartay dadaaladda dowladda ee deyn cafinta, xilli ay qeyb ka aheyd shuruudihii looga gudbayey SMP-ga.
3 – Waxa uu soo afjaray khilaafkii u dhexeeyey Wasaaradda iyo kuwa dowlad gobolleedyada oo ay hadda wada-shaqeyn wanaagsan kala dhexeeyso, waxa ay heshiis ka gaareen qeybsiga dhaqaalaha iyo maamulka Kheyraadka ku jira badda.
4 – Waxa uu dagaal xooggan la galay kalluumeysiga sharci darrada ah oo ay ugu dambeeysay Iran oo uu dhawr bilood kahor si cad weerar saxaafeed ugu qaaday.
5 – Waxa uu sharciyeey oo uu dhaqaale badan oo kabay dakhliga dowladda ka saxiixay dalka China. Heshiiska China ayaa ku koobnaa kalluunka guur guura ee loo yaqaan Tuna. Tallaabadaas waxa ay horseed u noqotay in ay dhiirigaliso in sifo sharci ah loo soo maro Kheyraadka dalka iyo maal-gashiga waaxda ganacsiga buluugga ah (Blue Economy).
Dowlad xiray Nin lagu eedeeyey inuu basaasayay Imaaraadka Carabta
Galmudug oo Maanta soo Bandhigtay Nin fal kufsi ah geystay
Prev	Next 1 of 14,023